Ukufudumala kwezilwandle kungu-13% ngaphezulu kunokulindelekile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla, sisebenzisa izinto zokubasa ezimbiwa phansi ngezinhloso eziningi okuthi, ngenkathi zisenza izimpilo zethu zibe lula, zibe nemiphumela emibi engadingeki yokwengeza isikhutha emkhathini. Ngakho-ke, kusukela ngo-1980 amazinga e-CO2 enyuke ngaphezu kuka-40% okudale ukuthi ukufudumala kwembulunga yonke kusheshe.
Izilwandle zithatha ngaphezu kuka-90% wakho konke ukushisa, into, nakanjani, edala izinkinga eziningi empilweni ekuzo.
Ngokwesifundo esishicilelwe ephephandabeni i-'Science Advances ', ukufudumala kwezilwandle sekuvele kungu-13% ngaphezulu kunokulindelekile futhi kuyaqhubeka nokushesha. Ukufinyelela kuleso siphetho, basebenzise uhlelo lwe-Argo flotation, okuyizintantayo ezikhuphuka futhi zehle ngokuzimela olwandle, ziqoqa idatha yamazinga okushisa ekujuleni kwamamitha ayi-2000. Uma selilayishiwe, bathumela le datha ngokungenantambo kuziphuphutheki ukuze zihlaziyeke ngokwengeziwe.
Ngokuqhathanisa izilinganiso zokushisa nemiphumela abayibalile kusuka kumamodeli ekhompiyutha, futhi besebenzisa idatha yamuva yokushisa, bakwazi ukwazi ukuthi izinga lokushisa ngo-1992 licishe liphindwe kabili kunelo-1960. Lokhu kusho ukuthi ukufudumala kolwandle kuyashesha eminyakeni yamuva.
Abaphenyi bathole ukuthi izilwandle zaseningizimu zithole ukufudumala okukhulu, kuyilapho ulwandle i-Atlantic nolwandle lwaseNdiya lusanda kuqala ukwenza le nqubo. Noma kunjalo, akungabazeki ukuthi, njengoba izinga lokushisa landa, kancane kancane futhi ngokuqhubekayo zonke izingxenye zeplanethi yoMhlaba zizothinteka.
Endabeni ethile yolwandle, sesivele sibona imiphumela: izixhobo zamakhorali zibala mhlophe, inani labantu be-krill lehliswe ngaphezulu kwe-80%, futhi kukhona ezinye izilwane, njengejellyfish, eziqala ukwanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukufudumala kwezilwandle sekuvele kungu-13% ngaphezulu kunalokho obekulindelekile